Umhla My Pet » Ndithandana Mfazi Omnci Emva Uqhawulo Made Easy
ukubuyekezwa: Jul. 08 2020 | 2 min ukufunda
Age ukungalingani ekuthandaneni sabakho, yinto ekho ingaqhelekanga. nokuba, abantu abawela kumaqela athile abandakanyeke ulwalamano olunjalo rhoqo ngaphezu kwabanye. Njengokuba, ngokutsho isifundo epapashwe Marriage and Review Family, amadoda umtshato kusenokwenzeka ukuba umhla atshate nabafazi abancinane kakhulu kubo.
Kutheni abantu abaninzi umtshato khangela ukuba ukuthandana abafazana?
Zezigulo zengqondo sithetha eziliqela izinto isenokusiqhubela amadoda umtshato ukuba khangela abaselula kakhulu abasetyhini ngaphezu kwabo ukuthandana. Olu luhlu lungezantsi iquka aqheleke kakhulu phakathi kwabo.
– Bafumanisa isimo khefu abafazana nomtsalane ngakumbi.
– Emva komtshato, abantu abaninzi kufuna elininzi ixesha ukuze; njengoko sele abandezeleka ngokweemvakalelo, abazifunayo ukuba umhla amabhinqa impahla ubuncinane ngokweemvakalelo. basetyhini abasebatsha, ngenxa yamava abathandanayo ngaphantsi, ukwenza jikelele kwempahla ngaphantsi ngokweemvakalelo.
– basetyhini abasebatsha abafane cofa amadoda ukuba sihlale phantsi babe nosapho. Badla Ndicinga kakhulu ngoku ngaphezu ngekamva; Uthando abahlala mzuzu. Ukuba akukho ajenda ngokuzenzekelayo lwenza ukuthandana mnandi amadoda umtshato.
– Kulula kakhulu ukuba ukunconywa abafazana. amadoda umtshato ngo-40 ubudala, 50'S okanye 60 ubudala ngokokuqhelekileyo unemali eyaneleyo ukuba amaqabane abo kwiindawo amangalisayo aya (amantombazana) abangazange baye, kuthenga izipho abazange ndiphupha ngokufumana kunye nokusombulula iingxaki zabo (leyo abo badla abafazazana) kunye ukuqola kakhulu. La manyathelo aneleyo ukwenza kubetheleleke kwabasetyhini abasebatsha badla.
Nangona zonke ezi zinto kuxoxwe ngasentla kufuneka indima ukudlala xa umntu oqhawule ugqiba ukuba ukuthandana umfazi omncinane kakhulu kuye, kusenokubakho esinye isizathu enokwenzeka emva ukhetho loo ndoda. Kukho amadoda siqalise ukukhangela abafazana ngenxa nje yokuba abakwazi ukufumana nabani yobudala babo. Statistics zibonisa ukuba umtshato abaninzi eUnited States kwenzeka xa umntu na ubudlelwane phakathi 53 kwaye 72 kweminyaka yobudala; bambalwa kakhulu abasetyhini yelo qela lobudala ukungatshati.
umtshato? Ukuthandana umfazi omncinane? Gcina ezi zinto engqondweni
Xa ndithandana umfazi omncinane kakhulu kunawe, kufuneka agcine izinto ezithile engqondweni.
– iqabane lakho uyazi ukuba wena akunguye ngeenxa le chap omncinane; ukuze, musa ukuzama ukubonisa ukuba omnye. Musa ukufaka imibala ukuba akukho obutofotofo; musa ukwenza izinto zenziwa ngokuxhaphakileyo guys kwesi sizukulwana sangoku; musa ukwenza iinzame ukubonisa ukuba omelele ngokwaneleyo. Ezi turnoffs ngokuqhelekileyo enkulu nawuphi na umfazi, umfana okanye omdala.
– Ukunyanga iqabane lakho abatsha ngendlela efanayo unge wamphatha umfazi yobudala bakho. Ukuba bayakubona malunga ukungalingani ubudala, ulwalamano akuyi kusebenza.
– Unako ngokuqinisekileyo bathenge izipho umfazi omtsha ebomini bakho, kodwa umele ungaze ungayibaxi. Ukuba kukhazimla kakhulu imali, umfazi basenokucinga ukuba uzama nje ukubonisa.
Ubudlelwane phakathi umntu omdala nomfazi abasebatsha ngendlela eqhelekileyo lwalamano rhoqo ngokuthandana. Ngoko ke, ukuba umntu oqhawule ukhangela ukuba ukuthandana nomntu omncinci kakhulu akukho nto iphosakeleyo kuyo.
6 Tips ekusindeni kwiinyanga zasehlotyeni Solo!